Thu, Jul 2, 2020 at 8:39pm
आफै बजार अनुगमन गर्न उत्रिए विद्यार्थी संगठनहरू
काठमाडौं, ५ चैत । आफै अनुगमन गर्न विद्यार्थी संगठनहरू बजारमा उत्रिएका छन् । कोरोना भाईरसका कारण मौलाएको कालोबजारीविरुद्ध विधार्थीहरुले आफै बजार अनुगमन गर्ने भएका हुन् । मंगलबार काठमाण्डौमा बसेको संयुक्त विद्यार्थी संठगनको बैठकले कोरोना भाइरसको डरलाई मौका बनाएर व्यापारीले कालोबजारी गरिरहेको भन्दै शंका लागेको ठाउँमा आफैँ अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले कालोबजारी र महँगीविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुन पनि सरकारको ध्याकर्षण गराएको..
बालबालिकालाई परीक्षा सकेपछि घरबाहिर ननिस्किन शिक्षा मन्त्रीकाे आग्रह
काठमाडौं, ५ चैत । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले परीक्षा दिएर विद्यार्थीहरू लाई घर बाहिर ननिस्किन आग्रह गरेका छन् । एक अपिल जारी गर्दै उनले परीक्षा सकिएर अर्को शैक्षिकसत्र सुरु नहुन्जेलसम्म घरबाहिर नजान विद्यार्थीसँग अपिल गरेका हुन् । उनले भनेका छन्, “शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यसअघि नै चैत्र ५ गतेसम्म कक्षा १ देखि ९ सम्मका परीक्षा सञ्चालन गरिसक्न अनुरोध गरेको थियो ।..
प्रदेश २ को नाम र राजधानी ताेक्न मतदान हुँदै
मंगलवार, चैत्र ४, २०७६ साल
जनकपुर, ४ चैत । प्रदेश नम्बर २ को नाम र स्थायी राजधानीको टुंगो लगाउन विहान ८ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेश सभाको बैठक अझै बस्न सकेको छैन । सभामुख सरोज कुमार यादवले नाम र राजधानीका लागि गठित समितिको बैठक जारी रहेकाले प्रदेश सभा बैठक बस्न केही ढिला हुनेछ । उनले नाम र राजधानीको टुंगो मतदानबाटै लगाइने जानकारी दिए । प्रदेशको स्थायी राजधानी जनकपुर..
टिपर आतंक : तनावग्रस्त पनौतीमा लाग्याे अनिश्चितकालीन कर्फ्यु
काभ्रे, ४ चैत । पनौती तनावग्रस्त भएपछि काभ्रेको पनौतीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनिश्चितकालको लागि कर्फ्यु लगाएको छ । हिजो पनौती नगरपालिका–५ मानेश्वरीमा टिप्परको ठक्करबाट आमाछोरीको मृत्यु भएपछि स्थानीयले गरेको प्रदर्शन हिंसात्मक भएपछि प्रशासनले आज विहान नौ बजेबाट कफ्र्यू लगाएको हो । घटनाको विरोधमा गएराति पनि प्रहरी र स्थानीयविच झडप भएको थियो । झडपमा केही प्रहरी र प्रदर्शनकारी घाइते भएका थिए । स्थिती..
चक्रपथ निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग प्रस्ताव
काठमाडौँ,४ चैत। उपत्यकाको सहरीकरण र ट्राफिक जामलाई व्यवस्थित गर्न प्रस्तावित बाहिरी चक्रपथ निर्माणका लागि चिनियाँ निर्माण कम्पनीसँग प्रस्ताव माग्ने तयारी गरिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकावासीको दुई दशकदेखिको प्रतीक्षित आयोजनाको रूपमा रहेको बाहिरी चक्रपथ निर्माणका लागि चिनियाँ निर्माण कम्पनीसँग प्रस्ताव माग्नका लागि सहरी विकास मन्त्रालय, लगानी बोर्डको कार्यालय र उपत्यका विकास प्राधिकरणले संयुक्त रूपमा तयारी गरिरहेको लगानी बोर्डको कार्यालयले जनाएको छ । बोर्डका..
प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनामानै ११ करोड अनियमितता भएकाे पुष्टी
काठमाडाैं,४ चैत। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतको प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाअन्तर्गत शीत भण्डार निर्माणमा ११ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको ठहर गरेको छ । अनियमितता गर्ने परियोजनालाई कारबाही गर्न अख्तियारले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाको नाममा सरकारले शीषत भण्डारका लागि दिएको करोडौँ अनुदानमा अपेक्षा अनुरुप परिणाम नदेखिएको औंल्याएको छ । आयोगले प्रधानमन्त्री कृषि..
'ग्यास सहज नबनाए सेना र प्रहरी लगाएर वितरण गर्छाैं : मन्त्री भट्ट
काठमाडाैं,४ चैत। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले बजारमा एलपी ग्यास सहज नबनाए सेना र प्रहरी लगाएर वितरण गरिने बताएका छन् । दैनिक मागभन्दा बढी आयात हुँदा पनि बजारमा ग्यास नपाइएको भन्दै उनले ग्यास उद्योगी र नेपाल आयल निगमका प्रतिनिधिलाई सोमबार मन्त्रालयमा बोलाएर उक्त चेतावनी दिएका हुन् । सो अवसरमा मन्त्री भट्टले व्यवसायीहरूको नाफा सरकारले तोकिदिएको चर्चा गर्दै सङ्कटको फाइदा उठाएर कालोबजारीको..
साेमबार राष्ट्रियसभा बैठकमा आधा दर्जन विधेयक पेश हुँदै
काठमाडौं, ३ चैत । साेमबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा आधा दर्जन विधेयक पेश हुने भएका छन् । दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक पेश गर्नेछन् । बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अध्यागमन विधेयक २०७६ लाई दफाबार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गर्ने..
विद्यालय सुधार कार्यक्रमको चार अर्ब बजेट तीन महिनामा खर्च गर्ने तयारीमा राष्ट्रपति
काठमाडाैं,३ चैत। आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना मात्रै बाँकी छँदा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको पौने चार अर्ब बजेट भौतिक निर्माणमा खर्च गर्ने गरी विद्यालयलाई बाँड्न लागिएको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले तीन अर्ब ७३ करोड खर्च गर्नका लागि देशभरका सामुदायिक विद्यालयसँग प्रस्ताव माग गरेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा भवानीश्वर गौतमले लेखेका छन्। तर, हतारमा खर्च गर्न लागिएको बजेटको सदुपयोग तथा..
बजारमा ग्याँस र खाद्यान्नको असहज भइरहदा, व्यवसायी भन्छ अभाव छैन
काठमाडाैं,३ चैत। कोरोना भाइरसका कारण बजारमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभाव भएको उपभोक्ताले गुनासो गरिरहँदा व्यवसायीले भने अभाव नरहेको दाबी गरेका छन्। भाइरसका कारण दैनिक उपभोग्य सामग्रीको माग उच्च हुँदा केही समस्या भए पनि अभाव नभएको निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ। कमर्सका आपूर्ति सभापति तथा थोक व्यापारिक संघका अध्यक्ष देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठले बजारमा पर्याप्त मात्रामा दैनिक उपभोग्य..
कोरोना भाइरस संक्रमित भए उपचार राज्यले गर्छ: स्वास्थ्यमन्त्री
काठमाडौं,३ चैत। स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भए उपचार खर्च राज्यले व्यहोर्ने बताएका छन् । नेपालमा कोही पनि कोरोनाबाट संक्रमित नभएको जानकारी दिँदै मन्त्री ढकालले संक्रमण भित्रिन नदिन सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको बताए । ‘कोरोनाबाट बिरामी भएको पुष्टि भए उपचारको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिन्छ’, राष्ट्रियसभा बैठकमा आइतबार उनले भने, ‘कोरोना नसार्ने कुराका लागि प्रत्येक नागरिकले सावधानी अपनाऔं भन्ने सरकारको आग्रह हो..
रवीन्द्र मिश्रको साझा पार्टी र कमल थापाको राप्रपाको एकता कहिले ?
काठमाडौं, २ चैत पूर्व पञ्चहरूको बहुल्यता रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातान्त्र पार्टी संयुक्तबीच पार्टी एकीकरण भएको छ। कहिले फुट त कहिले जुट गर्दै आएका राप्रपाको एकता टिक्ला भन्नेमा आम नेता तथा कार्यकर्ता नै विश्वस्त देखिँदैनन्। समान एजेण्डा र पार्टीको बटमलाइन मिलेपछि पार्टी एकीकरण हुनु स्वाभाविक नै हो। खासगरी संविधान निर्माणपश्चात सभ्य र सुसंस्कृत राजनीति गर्ने भनेर स्थापना भएको साझा पार्टीको..
कांग्रेस कार्यकर्ताले भत्काए कञ्चनपुरकाे नेपाल-भारत सीमा स्तम्भ
कञ्चनपुर, २ चैत । नेपाली भूमिमा नेपाल-भारत सहायक सीमास्तम्भ गाडिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेतारकार्यकर्ताले कञ्चनपुर बेल्डाँडी गाउँपालिकामा सीमा स्तम्भ भत्काएका छन्। शनिबार कांग्रेस कार्यकर्ताले सहायक सीमास्तम्भ तोडफोड गरेका हुन्। उक्त सीमास्तम्भ केही दिनअघि नेपाल-भारत संयुक्त सर्भे टोलीले बेल्डाँडी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ वैवाहमा सहायक सीमास्तम्भ ७८३र४ निर्माण गरिएको थियो। शशस्त्र प्रहरी बल ३५ नम्बर गणका गणपति शसस्त्र प्रहरी उपरीक्षक वीरसिंह साहुले कांग्रेस कार्यकर्ताले..
स्वास्थ्य परीक्षणका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई शिक्षण अस्पताल लगिदै
काठमाडौं, २ चैत। प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल लगिने भएकाे छ । दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरी स्वास्थ्य लाभ गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओली दशौँ दिनमा ‘डिस्चार्ज’ भएर बालुवाटार फर्किएका थिए । दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारेपन पश्चात पहिलो पटक फलोअपको लागि उनी अस्पताल जान लागेका हुन् । यद्यपि उनलाई आराम गर्न र रुघाखोकी तथा संक्रमण भएका व्यक्तिहरुबाट टाढा रहन..
अख्तियार र अदालत धाउनेले काम गर्नै दिएनन् : विद्यासुन्दर शाक्य
काठमाडौं २ चैत । काठमाडौं महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले अख्तियार र अदालत धाउने समूहका कारण विकास निर्माणमा असहज भएको आरोप लगाएका छन् । महानगरको विकाससँग जोडिएका विषयमा अख्तियार र अदालत पनि सकारात्मक हुनुपर्ने उनले बताए । ‘बिरालोलाई बाँधेर श्राद्ध गर्ने परम्पराको अन्त्य हुनुपर्छ,’ मेयर शाक्यले भने, ‘जनप्रतिनिधिका पनि केही समस्या र बाध्यताहरू हुन्छन्, यस्ता बाध्यतालाई सबैले बुझिदिनुपर्छ ।’ महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रतिनिधिसँगको..
एसईई परीक्षा नराेकिने
कठमाडौं, २ चैत। कोरोना भाइरसको कारण देखाउँदै आउँदो चैत ६ गतेबाट सञ्चालन हुन लागेको एसइइ परीक्षा रोक्नु पर्ने अवस्था नआएको बताइएको छ । कोरोना भाइरसको त्रास देखाउँदै परीक्षा रोक्नु पर्ने अवस्था नआएको भन्दै परीक्षा रोकेर विद्यार्थी तथा अविभावकहरुलाई त्रास फैलाउन नहुनेतर्फ पनि सचेत हुनुपर्ने उच्च सरकारी अधिकारीहरू भनाई रहेको छ । परीक्षा रोक्ने , विद्यालय बन्द गर्ने तर खुला नाका यथावत..
७८ हजार सर्जिकल मास्कसहित ८ जना पक्राउ
काठमाडाैं,२ चैत।प्रहरीले बजार मूल्यभन्दा चर्को मूल्यमा बिक्री गर्न राखेको करिब ७८ हजार सर्जिकल मास्कसहित ८ जनालाई पक्राउ गरेको छ । काठमाडौंको डल्लुबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी परिसर काठमाडौंका डीएसपी होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिए । पक्राउ पर्नेमा काठमाडौं नागार्जुन–२ का अनिश कार्की, उज्जवल अधिकारी, काभ्रे रोशी–९ का मानकाजी लामा, सोहीकै मिन्टु तामाङ, बाजुराका थुमराज उपाध्याय र नृप कार्की छन् । सर्जिकल मास्क ३ देखि..
हिमेश पन्तले कमेडी च्याम्पियन जित्दा खबपू समर्थकको विरोध
काठमाडौ, १ चैत्र कमेडी च्याम्पियनको पहिलो संस्करणको विजेता हिमेश पन्त भए संगै खड्ग बहादुर पुनका समर्थकहरुले कार्यक्रम बाहिर विरोधको नाराबाजी सुरु गर्न थालेका छन् । खड्ग बहादुर पुन मगरको समर्थकहरुले कार्यक्रमको बाहिर भोटिङ्गका अनुसार विजेता बनाइएन भन्दै नाराबाजी सुरु गरेका छन् । कमेडी च्याम्पियन मुर्दावाद भन्दै नाराबाजी लाउँदै धाँधली भएको जनाएका छन् । जातिवादको कुरा समेत उठाउँदै नाराबाजी लाएको पाईएको छ । बाहुन..
अस्पतालले पनि नमेटेको दुई अध्यक्षको दरार !
काठमाडौं, १ चैत्र पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमबारे माथापच्ची चलिरहँदा वागमती प्रदेश कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका थिए– “हामी दुई अध्यक्ष विवाद पनि गर्छौं । मिल्छौं पनि । हामी विभाजित हुँदैनौं ।” फागुन १४ गतेको सचिवालय बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पार्टीभित्र अन्तरविरोध पैदा भएको थियो । सचिवालयको निर्णयका सन्दर्भमा पार्टीका नेतापिच्छेका अलगअलग व्याख्या र विश्लेषणले कार्यकर्ता अन्योलग्रस्त थिए..
के चीनमा अमेरिकी सैनिकबाट कोराना भाइरस फैलिएको हो ?
एजेन्सी, १ चैत्र सन् २०१९ को अगस्त महिनामा अमेरिकी भाइरस रिर्सच बेसले आपतकालिन सट डाउन गरेको थियो । सट डाउन भएको एक महिनापछि अमेरिकी राज्यमै फ्लू भयावह बनेको थियो । अमेरिकामा फ्लूका कारण ३७ हजार मानिसको ज्यान समेत गएको थियो । त्यहाँ उत्पत्ति भएको फ्लूलाई नियन्त्रण गर्न नसकेपछि उक्त भाइरससित लड्न भाइरसलाई सन् २०१९ को अक्टूबर महिनामा चीनको हुबेई प्रान्तको वुहान..
भारतमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेकाे संख्या दुई पुग्याे
काठमाडाैं,१ चैत। कोरोना भाइरस (कोविड–१९)बाट भारतमा फेरि एक जनाको मृत्यु भएको छ । कारोना संक्रमणका कारण दिल्लीकी ६९ वर्षीया महिलाको मृत्यृ भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । मृत्यु भएकी महिलामा डाइबिटीज र हाइ ब्लडप्रेसरको समस्या पनि थियो । उनलाई राम मनोहर लोहिया अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । ती महिलाको छोरा ५ देखि २२ फेब्रुअरीको बीच इटाली र स्वीट्जरल्याण्डको यात्रामा थिए । उनी २३..
प्रदेश २ को नाम र राजधानी चैत ४ गते मतदान गरी ताेकिने
काठमाडाैं,१ चैत। प्रदेश नम्बर २ को स्थायी राजधानी र नामकरणका लागि चैत ४ गते मतदान हुने भएको छ। तीन महिनापछि शुक्रबार बसेको प्रदेशसभामा प्रदेशको नाम र राजधाननी तोक्न गोप्य मतदानका लागि प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै चैत ४ गते ८ बजे बिहान मतदान गर्ने सर्वसम्मतिले निर्णय गरिएको छ। बैठकमा अध्ययन विशेष समितिले मतदानका लागि तयार पारेको प्रतिवेदन राजपाका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहले..
नेपाल र गौतमबीच प्रचण्ड निवासमा छलफल
काठमाडाैं, १ चैत । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी 'नेकपा' का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमबीच शुक्रबार छलफल भएको छ । छलफलमा तीनै जना नेताले पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । दाहाल निवास खुमलटारमा तीन नेताको बीचमा पछिल्लो छलफल भएको बताइएको छ । नेपाल र गौतम दाहाललाई भेट्न खुमलटार पुगेका हुन् । उनीहरुबीच पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे..
देउवालाई शशांकको खुलापत्र : तपाईंकै कारण पार्टी बिग्रियो
काठमाडौं, ३० फागुन नेपाली कांग्रेस महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले खुलापत्र लेख्दै सभापति शेरबहादुर देउवाका कारण पार्टीभित्र एकताको वातावरण विथोलिएको आरोप लगाएका छन्। पार्टीभित्र एकताका पक्षमा आफू हुँदाहुँदै पनि सभापति देउवाको एकपक्षीय निर्णयले विवाद बढेको कोइरालाको आरोप छ। नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पश्चिम) का पार्टीको जिल्ला नेतृत्वका सम्बन्धमा शनिबार महामन्त्री कोइरालाले सभापति देउवालाई बुझाएको पत्रमा असन्तुष्टि जनाएका हुन्। सभापति देउवाले फागुण २३ गते नवलपरासी..
बक्यौता र राजश्वमा कुलमानले लापरवाही गरेको खुलासा !
काठमाडौं, ३० फागुन प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङसहित सञ्चालक समितिले १० अर्ब बक्यौता उठाउन खेलाँची गरेको ठहर गरेको छ। उपसमिति संयोजक मिनेन्द्र रिजालले समितिमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा घिसिङ र त्यसअघिका प्रबन्ध निर्देशकले राजश्व सम्बन्धी गम्भीर लापरवाही गरेको उल्लेख छ। विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले लोडसेडिङका बेला २० घण्टा भन्दा बढी विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहकले पनि..
काठमाडौं, ३० फागुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । फागुन २१ गते मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएका प्रधानमन्त्री ओली शुक्रबार साँझ त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा डिस्चार्ज भएका हुन् । उनको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो रहेको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । ..
सहज भयाे बैंकिङ कर्जा: ५० लाखसम्म ऋण लिँदा करचुक्ता प्रमाणपत्र नचाहिने
काठमाडौं,३० फागुन। नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० लाख भन्दा कम कर्जाका लागि अब कर चुक्तासम्बन्धी कुनै पनि प्रमाणपत्र बुझाउनु नपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाममा बिहीबार परिपत्र जारी गर्दै ५० लाखको सीमासम्म ऋण लिँदा त्यस्तो कुनै पनि कागजात आवश्यक नपर्ने जनाएको हो । यसअघि राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई करचुक्ता प्रमाणपत्रको आधारमा मात्रै ऋण दिन र त्यस्तो ऋण..
ओली अस्पताल भर्ना भएसंगै सुस्तायो राजनीतिक गतिविधि
काठमाडाैं,३० फागुन। मुलुककै कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना भएपछि सरकारी कामकारबाहीका साथै राजनीतिक गतिविधि सुस्ताएको छ। सिंगो देशको ध्यान प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा केन्द्रित भएकाले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेताको भेटघाटसमेत सुस्ताएको छ। फागुन १८ पछि नेकपाको सचिवालय बैठकसमेत बसेको छैन। कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी सचिवालयको बैठक बोलाएका छैनन् भने प्रधानमन्त्री नै अस्पतालमा..
काठमाडाैं,३० फागुन। गैरकानुनीरुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी शुद्धीकरण गरेको ठहर गरी विशेष अदालतले पूर्वमन्त्री सञ्जयकुमार साहलाई बिगोको दोब्बर २८ करोड ५० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने बिहीबार फैसला गरेको छ । उनलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेकोमा ५ वर्ष कैद हुनेसमेत ठहर गरेको छ । विशेष अदालतलका न्यायाधीशहरु कृष्ण गिरी, शान्ति सिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारुको इजलासले २८ करोड ५० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरी ५ वर्ष..
ज्वरो आएपछी क्यानडाका प्रधानमन्त्री श्रीमतीसहित क्वारेन्टाइनमा
काठमाडाैं,३० फागुन। क्यानडेली प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले श्रीमतीमा ‘फ्लू’ जस्तो लक्षण देखिएपछि आफूलाई घरभित्र क्वारेन्टनाइनमा राखेका छन् । ट्रुडोको कार्यालयले बिहिबार दिएको जानकारी अनुसार सोफी ग्रेगोइर ट्रुडोलाई ब्रिटेनमा आयोजित एक कार्यक्रमबाट फर्किए लगत्तै रुघा खोकीलगायत बुधबार राती सामान्य ज्वरो पनि आएको थियो । उनीमाथि कोभिड–१९ को परीक्षण गरिएको र रिपोर्ट आइनसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ । ‘सावधानीस्वरुप प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सेल्फ आइसोलेशनमा राखेका छन्..
Results 9714: You are at page 26 of 324